Ojiji nke prọprọ corrugated plastic board?
Eyi corrugated plastic board bụ waterproof na ìhè. Ngwurugwu mmiri na-adịghị emerụ emerụ dị ka kaadiboodu ọdịnala, ọ na-eguzogide nchara, nchara na mgba, a pụkwara iji ya mee ihe ọzọ. Ebe ọ bụ na 2008, Huiyuan Plastic oghere Board ka mma nọgidere na-enwe na mepụtara ya ike ...
Ogologo oge ole ka a ga-eji igbe ntụgharị ihu ọha izugbe?
Oghere ndị na-emepụta oghere oghere Ndụ nke igbe mgbochi oghere na-emechi emechi abụghị naanị metụtara ogo ngwaahịa, kamakwa metụtara usoro ojiji. Iji gbatịa ndụ ọrụ ma belata ọnụ ahịa ojiji, gịnị ka a ga-eme? Iji gbochie static ọkụ eletrik, oghere mpempe akwụkwọ manu ...
Oghere ntụgharị ntụgharị oghere: Kedu uru nke igbe ntụgharị ntụgharị oghere na ngwa?
Oghere ntụgharị ntụgharị oghere Oghere oghere nwere ọtụtụ uru dị ka ụdị ọhụụ dị mfe iji rụọ ọrụ, yana igbe ntụgharị oghere nke sitere na mmepụta na nhazi nke oghere oghere na-eketa uru a dị mfe iji wee jiri nwayọọ nwayọọ dochie ọdịnala katọn Na ngwa ...